FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA STAFF TERRY STAFF TERRY BULL - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Staff Terry Staff Terry Bull
Broxi amin'ny faha-8 volana - Staffordshire Bull Terrier miloko manga, KC voasoratra anarana. Alika voajanahary izy, sariaka be, ary tena tsara amin'ny sekoly fankatoavana. Sary natolotry ny SKEG
Lisitry ny Staffordshire Bull Terrier Mix Dogs
Alika hozatra ny Staffordshire Bull Terrier, matanjaka be noho ny habeny. Fohy sy lalina ny loha, misy karan-doha malalaka, fohy aloha, fijanonana miavaka ary valanoranony matanjaka. Mainty ny orona. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Tokony ho tery sy madio ny molotra. Ny maso boribory dia mainty ny lokony, mifandraika amin'ny palitao. Ny sofina somary kely kosa dia voatsindry na ratra. Mahitsy ny tongotra eo anoloana. Esorina ny godclaws indraindray ary antonony sy matevina tsara ny paws. Ny rambony ambany dia matevina kokoa eo am-potony, mihidy hatramin'ny teboka iray ary naidina ambany. Tsy tokony miforitra be ny rambony ary azo oharina amin'ny paompy efa taloha. Ny palitao malama sy fohy dia tonga amin'ny loko mena, volondavenona, fotsy, mainty na manga, na amin'ireto loko ireto misy fotsy sy amin'ny aloky ny brindle misy na tsy misy marika fotsy.
Ny Staffordshire Bull Terrier dia manao ny zava-drehetra: ny lalao, ny asa ary ny fitiavana. Tena be herim-po sy mankatò izy ary be fitiavana miaraka amin'ny hatsikana. Ny tompona iray an'ity karazana ity dia nilaza hoe: 'Staffordshire Bull Terriers dia olona sariaka be. Tsy dia mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra izy ireo saika amin'ny toe-javatra rehetra - na dia henoko aza ny anecdotes vitsivitsy momba ny sasany mitandrina amin'ny olona manokana. Faly foana ny alikako mahita olona vaovao! ' Ny lazan'ny zana-ketsa miaraka amin'ny ankizy dia tsy misy farany. Ankafiziko sy fiankohofana ao anatin'ny faribolam-pianakaviany. Matetika izy io dia tsara amin'ny biby fiompy hafa ao an-trano, fa raha tsy misy mpitondra henjana sy mahery setra manome fanitsiana ara-potoana rehefa ilaina dia mety hiady amin'ny alika ivelan'ny fianakaviana izany. Araraoty tsara izy ireo . Ity karazana ity dia manan-tsaina, maharitra ary miasa. Tsy mahay milomano tsara. Amin'ny alàlan'ny alika kely ireto alika ireto dia mirona hitsako be dia be ka alao antoka fa manome kilalao mitsako betsaka ho azy ireo ianao. Ny valanoranony matanjaka dia ho rovitra na dia kilalao vinyl aza mba ho tonga amin'ny squeaker amin'ny fotoana fohy. Mety hampidi-doza izany raha atelin'ny alika ny plastika. Aza hadino ny manome kilalao matanjaka anao Staffie. Aza avela hitily amin'ny tanan'alika ny alika kely. Aza avela hiala amin'ny tadiny ny alikanao raha tsy azo antoka ny hanaovana azy. Izy ireo dia azo zarina amin'ny fahazotoana sy fankatoavana amin'ny fifaninanana. Ny karazany dia mifaninana amin'ny hakingana sy ny fankatoavana any Angletera amin'ny ambaratonga avo indrindra. Tian'ireo mpiasa ny fanamby sy ny karazany. Ny tompony dia mila miaro ireo alika ireo mba tsy handratra tena. Tsy misy tahotra sy liana tanteraka izy ireo, fa afaka mitsambikina avy eny ambony tokotanin-tsambo na mandeha mamaky fitaratra vaky. Mety ho sarotra amin'ny vaky trano izy ireo. Ireo alika ireo dia tsy atolotra ho an'ny ankamaroan'ny fianakaviana, satria mila ny olona tsirairay amin'ny fianakaviany ho mafy orina, matoky tena, mpitarika fonosana tsy miova , manome fitsipika izay tsy maintsy arahin'izy ireo ary mametraka fetrany amin'izay azony atao sy tsy azony atao. Raha tsy misy an'io dia ho lasa maditra izy ireo ary sarotra tantanana . Ny tanjona ao Training alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo.
Haavony: Lehilahy 14 - 16 santimetatra (36 - 41cm) Vehivavy 13 - 15 santimetatra (33 - 38 cm)
Milanja: Lehilahy 25 - 38 kilao (11 - 17 kg) Vehivavy 23 - 35 pounds (10 - 16 kg)
Mora voan'ny katarakta, HC ary PHPV (fitarainana amin'ny maso roa), na dia azo sorohina aza amin'ny alàlan'ny fisavana ny ray aman-dreny. Ny asa ADN any Angletera dia tena saika tanteraka hanasitranana an'io (ny olona dia tokony hiantoka ny fividianan'izy ireo amin'ny ray aman-dreny voasedra maso, ary ny alika kely dia alefa amin'ny herinandro vitsivitsy). Hip dysplasia dia hita indraindray. Mora amin'ny fivontosan'ny sela . Ny alika kely dia mora manana lanilany malefaka maharitra. Toy ny karazana karazana mpampijaly rehetra, Staffordshire Bull Terriers dia matetika manana olana amin'ny entona.
Ny Staffordshire Bull Terrier dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha tsara ampiasaina. Mavitrika be izy io ao an-trano ary tsy hiala amin'ny tokotany kely.
Ny Staffordshire Bull Terrier dia manana tanjaka lehibe ary tsy maintsy manana fanatanjahan-tena betsaka, izay mila ampidirina isan'andro MANDEHANA na jogging.
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Borosio isan'andro amin'ny borosy mafy volo, ary sasao ny shampooing na maina raha ilaina izany. Hamirapiratra ny palitao raha kosehina amin'ny lamba famaohana na chamois.
Ny Staffordshire Bull Terrier dia novolavolaina tany amin'ny faritr'i Staffordshire, Angletera, tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo tamin'ny fiampitana teo anelanelan'ny Bulldogs sy ireo terriers isan-karazany izay nitovy tamin'ny Manchester Terrier . Ny Staffordshire Bull dia novolavolaina ho an'ny fanatanjahan-tena amin'ny laon'ombilahy. Ny lazan'ny zana-ketsa dia nihena noho ny fahalianan'ny fanatanjahan-tena. Avy eo, tamin'ny taonjato faha-20, nitombo indray ny fahalianana tamin'ny karazany, indrindra fa tany Etazonia. Niverina tamin'ny peratra fampisehoana izy tamin'ny 1935. Any Etazonia izy io dia tsara volena amin'ny habe somary lehibe kokoa noho izay nantsoina tamin'ny fenitra eropeana. Ny Staffordshire Bull Terrier dia tsy alika ho an'ny fianakaviana tsirairay, fa eo am-pelatanan'ny a manjaka , tompona za-draharaha dia mety ho mpiompy biby sy mpiambina mahomby. Ny AKC dia neken'ny AKC tamin'ny taona 1975.
Rumble ny alika Staffordshire Bull Terrier amin'ny tokony ho 2 volana eo ho eo
afangaro min pin sy chihuahua
Kanelina ny Staffordshire Bull Terrier amin'ny maha alika azy amin'ny 4 volana
Bossy the English Staffordshire Bull Terrier amin'ny 2 taona avy any Aostralia
Ny Staffy blondy eo alohaloha dia i Tedi, ary eo ankavanana dia i Nitro, rain'i Staffy volontsôk'i Tedi.
Oscar the Staffordshire Bull Terrier amin'ny 4 volana
Cali the Staffordshire Bull Terrier puppy amin'ny faha-4 volana— 'Cali dia Staffordshire Bull Terrier falifaly sy feno fientanam-po izay tia milalao fakana ary mandeha lavitra amin'ny tolakandro.'
Tyra the English Staffordshire Bull Terrier amin'ny 2 taona
Staffordshire Bull Terrier pup dia voasoratra anarana hoe 'Wanted Samson foana' miaraka amin'ny The Kennel Club UKK, fananan'i Steve Lewis
Staffordshire Bull Terrier olon-dehibe voasoratra anarana hoe 'Wanted Samson foana' miaraka amin'ny The Kennel Club UKK, fananan'i Steve Lewis
Eric Thunderpaws ny faha-2 an'ny Staffordshire Bull Terrier amin'ny faha-12 taonany eo amin'ny sofa— 'Malina saina izy, tsara fanahy ary malemy fanahy tian'ny olona rehetra nifanena taminy. Nentiko avy tao amin'ny tobim-panavotana izy rehefa 18 volana izy ary niharan'ny fanararaotana mahatsiravina, toa feno fankasitrahana foana izy. '
Hijery ohatra hafa momba ny Staffordshire Bull Terrier
Staffordshire Bull Terrier Sary 1
Staffordshire Bull Terrier Sary 2
Staffordshire Bull Terrier Sary 3
Staffordshire Bull Terrier Sary 4
alika yorkie sy shih tzu
Zavatra bulldog staffordshire omby terrier Mix